Telecom - Wadar Power Technology (UK) CO, LTD..
Wadar ahaan waa Company a caalamiga ah diiradda on design, soo saaridda iyo qaybinta nidaamka jiilka Power iyo Energy sare solutions.Backed by taageero baxay dealer maxaliga ah khabiir, Wadar Power waa bixiyeyaasha brand adduunka oo dhan ayaa u jeestay, waayo, korontada fog ku kalsoon tahay oo la isku hallayn karo ee .
Our waayo-aragnimo la shaqeeya oo waaweyn, sida warshadaha ee isgaarsiinta ka shaqeeya, ayaa noo keentay in la qorsheeyo Haamaha Shiidaalka orodka dheer ammaanka ku daray in maanka.
Waxaan samaynay kala duwan caadiga ah ee 500 iyo 1000 taangiyada litir, sidoo kale hal ama deyr leh double. Sababtoo ah qof walba waxa uu leeyahay baahiyo kala duwan, injineerada khabiir our astaysto qurbaan our si ay u buuxiyaan shuruudaha aad shakhsi.
Iyada oo warshadaha keentay Hab kontaroolo bixiya baakadaha isgaarsiinta fog, aan laguu suurogeliyo in aad la socon oo xakamayso qalabka xafiiska ama halka on dhaqaaqo.
Qaar badan oo baakadaha guddi ay gacanta hadda muuqan apps smartphone in bixiyaan helitaanka xuduudaheedu set matoor shaqsi iyo dhalin farriimaha kasta oo arrimaha ku saabsan aqoonta site.Advance ah arin aad u saamaxaaya in uu soo dhaweeyo khayraadka ku haboon, badbaadinta booqasho khasaaray iyo ugu dambeyntii, lacag.